မီဆို (みそ or 味噌?) သည် ရိုးရာဂျပန် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ပဲပိစပ်ကို ဆားနှင့် ခိုးဂျီ (麹?)ဟု ဂျပန်လိုခေါ်သော မှိုတစ်မျိုးကို(တစ်ခါတရံ ဆန်သို့မဟုတ် ဘာလီကို) အချဉ်ဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရလဒ်မှာ အနှစ်ထူလပျစ်တစ်မျိုးဖြစ်လာ၍ စားမြိန်ရည်(ဆော့)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အသားနှင့် အသီးအရွက်များကို သနပ်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သုတ်လိမ်းစားသောက်ရန်လည်းကောင်း၊ ဒါရှီဟင်းရည်နှင့်ရော၍ ဂျပန်ဟင်းအတွဲအစပ်တစ်မျိုးအဖြစ် မီဆိုရှီရူ (味噌汁?)ဟုခေါ်သော မီဆို စွပ်ပြုတ်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုသည်။ ပရိုတိန်းဓာတ်ကြွယ်ဝ၍ ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်များနှင့် ပြည့်စုံသည်။ ဂျပန် ပဒေသရာဇ်ခေတ်တွင် မီဆိုသည် အရေးပါသော အာဟာရတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတဝန်းတွင် မီဆိုကို ရိုးရာဟင်းချက်ရာတွင်၎င်း၊ ခေတ်ပေါ်ဟင်းချက်ရာတွင်၎င်း ယနေ့တိုင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်၍ ကမ္ဘာအနှံ့မှ နှစ်ချိုက်မှုကိုလည်း ရရှိလာပြီဖြစ်သည်။
ယခုအခါ မီဆိုကို စက်ဖြင့် အမြောက်အများထုတ်လုပ်နေကြပြီး အိမ်လုပ်မီဆိုမှာ ရှားပါးလာသည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်များအတွင်း မီဆိုအမျိုးအစားသစ်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကယ်လစီယမ်ပိုပါသော်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက် ဆားလျော့ထားသည့် မီဆိုမျိုးဖြစ်သည်။
↑ (2009) History of Miso, Soybean Jiang (China), Jang (Korea) and Tauco (Indonesia) (200 BC-2009). Soyinfo Center, 627. ISBN 978-1-928914-22-8။
↑ Albala, Ken (2007). Beans:ahistory. Berg Publishers, 216. ISBN 1-84520-430-1။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မီဆို&oldid=416174" မှ ရယူရန်
၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၇:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၁၇:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။